Qatar: Imaaraadka oo ka danbeeyey kooxdii jabsatey warbaahinta dalka Qatar • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Qatar: Imaaraadka oo ka danbeeyey kooxdii jabsatey warbaahinta dalka Qatar
Qatar: Imaaraadka oo ka danbeeyey kooxdii jabsatey warbaahinta dalka Qatar
Posted: Abdirizak Shiino - July 17, 2017
Xog laga helay sirdoonka Maraykanka ayaa muujinaysa in in dalka Imaaraadka Carabtu ay ka danbeeyeen weerarkii dhanka Internetka ee lagu qaadey warbaahinta Qatar kaas oo lagu qoray warbixino khalad ah isla markaana mar-marsiiyo looga dhigtey xayiraada Qatar la saarey.
Xogta uu helay Wargeysta Washington Post oo ka soo xigatey laamaha sirdoonka Maraykanka ayaa sheegaysa in Imaraadka Carabtu ay isku duba rideen kooxdii weerarka ku qaatey warbaahinta Qatar kuwaas oo hal mar jabsadey Wakaalada Wararka ee Qatar, TV Qatar iyo barta Twitterka iyo weliba wargeysyo kale oo taageera xukuumadda.
Safiirka u fadhiya Imaaraadka Carabta Yousef al-Otaiba oo WaPo la xiriiretey ayaa beeniyey warkaas.
Kooxda lagu sheegay (Hackers) ee jabsadey warbaahinta Qatar ayaa la rumeysan yahay inay telefishinka iyo warbaahinta dowlada Qatar ay ku shaaciyeen xog been ah oo abuurtay xiisad ka dhex bilaabatay dalalka Khaliijka.
Qoraalada beenta ah ee lagu baahiyey warbaahinta dowlada Qatar ayaa ahaa khudbad been ah oo la sheegay inuu jeediyey Amiirka Qatar Al Thani xili uu ka qeyb galayey xaflad loo dhigay ciidamada dowlada.
Qoraalada been abuurka lagu sheegay in markii danbe loo adeegsadey qiil xayiraad lagu saaro Qatar ayaa dhigaaytey, Amiirka Qatar in uu sheegay in dalalka Khaliijka looga baahan yahay inay xiriir dhaw la yeeshaan kooxaha Xamas iyo Xisbullah oo ay u aqoonsadaan kooxo xaq u dirir ah, isla markana dalalka khaliijka ay joojiyaan cadaawada ay u hayaan IRAN. Waxaana intaasi loo sii raaciyey in Amiirka Qatar uuu sheegay in Madaxweynaha Maraykanka Trump uusan wakhti dheer xilka sii heyn doonin.
Madaxweynaha Puntland oo Imaaraadka Carabta looga yeeray?